Shijiazhuang Winclan Machinery Equipment Co., Ltd.Chigadzirwa chedu chikuru chinosanganisira pombi dzakasiyana. Pombi dzedu dzinoshandiswa zvakanyanya mukuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kuchera, marasha, magetsi emagetsi, peturu, makemikari, kurapwa kweseweji, mhando dzemapurojekiti ekuchengetedza mvura, kudiridza kwepurazi, kuvaka, nezvimwewo Panguva imwecheteyo, isu tinoshandawo mumagetsi, kutonga kutanga uye pombi zvikamu. Nemhando dzakasiyana siyana, mhando yakanaka, mitengo inonzwisisika uye dhizaini dhizaini, zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya mu petroleum, kemikari, mushonga uye mamwe maindasitiri.
Izvi zvinotsigirwa nehunyanzvi timu yehunyanzvi uye yakazara yekushandisa mainjiniya uye dhizaini dhizaini.
Isu tinozvirumbidza nekupa isina musono yekuwana ruzivo neboka rakazvipira rekutengesa pane yakamira kuona kuti mutengi wese anogamuchira yakanakisa sevhisi sevhisi.
Yedu ISO 9001: 2008 certification inovimbisa kuendesa kune vatengi zvinodiwa pasina kusarudzika.
YZ inopinza pombi